ယူဗင်တပ်နဲ့ မရင်ဆိုင်မီ သောမတ်စ် တူချယ်ရဲ့ ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အပြည့်အစုံ - SPORTS MYANMAR
ယူဗင်တပ်နဲ့ မရင်ဆိုင်မီ သောမတ်စ် တူချယ်ရဲ့ ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အပြည့်အစုံ
ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ ယနေ့ညမှာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ဒုတိယပွဲ အဖြစ် အီတလီ အင်အားကြီး ကလပ် ယူဗင်တပ် အသင်းကို တူရင်မြေမှာ သွားရောက် ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပွဲမတိုင်မီ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် က ထိုပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမေးတွေ ၊ ဒဏ်ရာ သတင်းတွေကို အခုလိုပဲ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ်ဆီက ဘယ်လို စိန်ခေါ်မှုမျိုး မျှော်မှန်းထားသလဲ ?
” သူတို့ဟာ အတွေ့အကြုံ ပြည့်ဝတဲ့ ၊ ပြိုင်ပွဲတိုင်းကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ ထိပ်တန်း အသင်း တသင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီရာသီ အစမှာ သူတို့ အထနှေးခဲ့ပေမယ့် ၊ ချန်ပီယံလိဂ်လို ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရထားတာ ဖြစ်လို့ ဒီလို အသင်းမျိုးနဲ့ ကစားရတဲ့အခါ ဘယ်လို ရလဒ်မျိုး ထွက်လာနိုင်တယ် ဆိုတာ ခင်ဗျား ဘယ်တော့မှ သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ”
” သူတို့မှာ အဓိက ကစားသမား အချို့ ဒဏ်ရာ ရနေတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း ထိုနည်း၎င်းပါပဲ ။ ကလပ်နဲ့ အတူ လိုက်ပါမယ့် အသင်းသား အားလုံး အားကိုးရပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ယူဗင်တပ် ကို သူတို့ အိမ်ကွင်းမှာ ရင်ဆိုင်ရမှာပါ ။ ဒီလို ခမ်းနား ကြီးကျယ်တဲ့ ပြိုင်ဖက် တသင်း အပေါ် လေးစားမှု ထားရမယ် ဆိုတာ ပြောနေစရာတောင် မလိုပါဘူး ။ ”
” တချိန်တည်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အရှုံးရလဒ်ကနေ ပြန်ပြီး အာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ ၊ စုဖွဲ့နိုင်ဖို့ ၊ ခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုသစ် တရပ်ကို အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပြန်ပြီး ရင်ဆိုင်ဖို့ ၊ ရလဒ်ကောင်းနဲ့ အတူ ပြန်လာနိုင်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ”
” ခရစ်တီယန် ၊ ရိစ် ၊ မေဆင် တို့က ဒဏ်ရာကြောင့် ပါနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အန်ဂိုလို ကလည်း ကံဆိုးစွာနဲ့ ကိုဗစ် ပေါ့စတစ် ထွက်ထားတာကြောင့် ကွာရန်တင်း ဝင်ရဦးမှာ ဖြစ်သလို ၊ သက်ဆိုင်ရာက ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာရပါမယ် ။ ”
ဘယ်တော့လောက် ရိစ်ဂျိမ်းစ်ရဲ့ ဒဏ်ရာ ပြန်ပြီး သက်သာနိုင်မလဲ ?
” အခုထိတော့ သူ နာကျင် ခံစားနေရတုန်းပါပဲ ။ အဆုံးမှာတော့ ဒီ ဒဏ်ရာ ပြန်ကောင်းမယ့် အချိန် ဟာ စီမံခန့်ခွဲတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်သွားမှာပါ ။ သူ ဒီဒဏ်ရာက နာကျင်မှုကို ဘယ်လောက်ထိ ခံနိုင်ရည် ရှိမလဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အနည်းဆုံး နောက်တပတ်လောက် သူ့ ဒဏ်ရာကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရပါဦးမယ် ။ ”
လူကာကူ ရောက်လာကတည်းက အသင်းရဲ့ pressing ကစားပုံကို ခင်ဗျား ပြောင်းလဲခဲ့တယ် မဟုတ်လား ?
” ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒါက ပုံမှန် အရာ တခုပါပဲ ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ခင်ဗျား ဟာ ရှိနေတဲ့ အသင်းသားတွေရဲ့ အားသာချက်တွေ အပေါ် မူတည်ပြီး ၊ ကစားကွက်နဲ့ နည်းစနစ်ကို လိုသလို အပြောင်းအလဲ လုပ်ရမှာမို့ပါ ။ တဖက်မှာ ဒီ မေးခွန်းကို ခင်ဗျား ဘာလို့ မေးသလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် ။ မန်စီးတီးနဲ့ ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကစားပုံ က ခံစစ် အသားပေးလွန်းခဲ့တာကိုး ။ ”
” ခံစစ် အသားပေးဖို့ ရွေးချယ်မှု ၊ ခံစစ် အသားပေး ကစားဖို့ အစီအစဉ် … ဒါတွေဟာ ကျွန်တော် တာဝန်ခံရမယ့် အရာတွေပါ ။ ဒါတွေကြောင့် အသင်းက လိုတာထက် ပိုပြီး ခံစစ်ဆင်း ကစားသလို ဖြစ်စေခဲ့တာပါ ။ နဂို အစီအစဉ်ထဲမှာ ဒါမျိုး မပါခဲ့ပေမယ့် ၊ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါ အရ သူ့အလိုလို ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပဲ ဆိုကြပါတော့ ။ ”
” ခံစစ် ခုခံတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပင်နယ်တီ ဧရိယာ အတွင်းထဲအထိ စုစုစည်းစည်း ခုခံရတာကြောင့် ပြိုင်ဖက်တွေကို ခံစစ်ဇုန် အတွင်းထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ကန်ခွင့် မပေးရပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် လိုတာထက် ပိုသွားရင်လည်း အသင်း အတွက် မကောင်းပြန်ပါဘူး ။ နည်းစနစ် ရွေးချယ်မှု က ပွဲအခြေအနေ အပေါ် အခုလို မြားဦး လှည့်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ”
” ဒီ အမှား အတွက် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ တာဝန် ရှိပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရိုမီလူ ရောက်လာကတည်းက ပြိုင်ဖက်တွေ အပေါ် high press လုပ်နိုင်ခဲ့သလို ၊ ဘောလုံး တားယူမှုတွေလည်း ပိုပြီး လျင်လျင်မြန်မြန် လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ နေရာလွတ်တိုင်းမှာ ရှိရမယ့် ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပွဲတပွဲပါပဲ ။ ”
” ဒါပေမယ့် ခံစစ် ကစားဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေကတော့ ဘောလုံး ကိုင်ထားတဲ့ တနည်းနဲ့ ဘောလုံး ခြေထဲမရှိတဲ့ အချိန် တန်ပြန် ဖိအားပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကို စီးတီး ဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ဟာ အဲဒီပွဲမှာ အရမ်း အရမ်း ကျစ်လျစ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသခဲ့တာ ရှင်းနေပါတယ် ။ ”
” ကျွန်တော်တို့ကတော့ သာမန်ထက် စွမ်းဆောင်ရည် နိမ့်ကျခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကလည်း သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို ခိုင်းစေခဲ့တာလို့ ပြောရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် အရှုံး ရလဒ်ကနေ ပြန်လာဖို့ အခွင့်အရေး လုံလုံလောက်လောက် ရှိနေပြီး ၊ ကိုယ် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ နည်းစနစ်မှာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် လုပ်ပြနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ ”
လက်ရှိ ချန်ပီယံ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ က ပိုပြီး ခက်ခဲနိုင်သလား ?
” မျှော်မှန်းချက်တွေ အရတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ underdog တသင်း အနေနဲ့ ဒီ ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့တော့ မနှစ်က ဒီလိုမျိုး အမြင်နဲ့ ကြည့်နိုင်ဖို့ ခက်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မနှစ်က ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ရေပန်းမစားခဲ့တုန်းက ကျွန်တော်တို့ဟာ တပွဲ ကစားပြီးတဲ့ အခါတိုင်း ယုံကြည်မှု ပိုပြီး မြင့်တက်လာတယ် ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ တွေ့ခဲ့ရမှာပါ ။ ”
” ဒီတော့ ပြိုင်ပွဲ တခုရဲ့ နောက်ပိုင်း အချိန်မှာမှ ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ ရေပန်းစားတာ က ကိုယ့်အသင်း ကို ဆုဖလား ရစေဖို့ ပိုပြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အခု အချိန်မှာတော့ လက်ရှိ ချန်ပီယံလည်း ဖြစ်တော့ ဒီရာသီမှာ ပြိုင်ပွဲ စကတည်းက ချန်ပီယံဆု အတွက် ရေပန်းအစားဆုံး အသင်းတွေထဲမှာ အလိုလို ပါသွားခဲ့ပါပြီ ။ ”
” ကျွန်တော်တိုနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါ ပြိုင်ဖက်တွေက ပိုပြီး မြင့်မားတဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုမျိုး ပြသနေတယ် ဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုး အခုကတည်းက ခံစားနေရပါတယ် ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရပါမယ် ။ ဒီ ပြိုင်ပွဲမှာမှ ချန်ပီယံ သွားဖြစ်ခဲ့တာကိုး ၊ ကိုယ့်အမှားလို့ပဲ ဆိုကြတာပေါ့ ။ ”
” လက်ရှိ ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်ရတဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့ ဒီ ပြိုင်ပွဲကို စတင်ရတာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်သက်တယ် ဆိုတာ ဖုံးကွယ်မထားချင်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီနှစ် ပြိုင်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကပဲ ထပ်ပြီး ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားနေတယ် ဆိုတာကိုတော့ လက်မခံလိုပါဘူး ။ တဖက်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကစားထားသမျှ ပွဲတွေမှာ ကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ ဆိုတာ ပြသထားခဲ့ကြပါတယ် ။ ”
” ချန်ပီယံ ထပ်ဖြစ်မဖြစ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ် ။ ဒီလို အများရဲ့ မြင့်မားတဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေကနေ လွတ်မြောက်အောင် ၊ သူတို့ မျှော်မှန်းချက်တွေက ကိုယ့်မျှော်မှန်းချက် ဖြစ်မလာအောင် ၊ လက်တွေ့ကျတဲ့ ကိုယ်ပိုင် မျှော်မှန်းချက်ကို ဆက်ပြီး ပစ်မှတ်ထားနိုင်ဖို့ကလည်း အရမ်း အရေးကြီးပါတယ် ။ ”
” ဒါဟာ အရမ်း အဆင့်အတန်း မြင့်မားပြီး ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီလို ပုံစံ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ပွဲတိုင်းမှာ ရရှိလိုကြပါတယ် ။ ခုနက ပြောတဲ့ အချက်တွေကို ပိုပြီး မြန်မြန် လိုက်နာလေလေ ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းလာလေလေပါပဲ ။ ဒီလို အခြေအနေတွေက တဆင့်ချင်းစီ ကျော်ဖြတ်ရတာတွေပါ ။ ”
ရော်နယ်ဒို မရှိတော့တဲ့ ယူဗင်တပ် ဟာ အရင်လို အင်အား တောင့်တင်းမှု ရှိနိုင်ပါ့မလား ?
” အချိန်က စကားပြောပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ခရစ်တီယာနို လစ်လပ်သွားတဲ့ ဘယ်အသင်း မဆို တစိတ်တဒေသစာ အားနည်းမှု ရှိသွားမယ် ဆိုတာ ကွယ်ဝှက်ထားစရာ မလိုဘူးလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူဟာ ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး လောကမှာ အကြီးကျယ်ဆုံး ကစားသမား တယောက် ဖြစ်ဖို့ ၊ ကွင်းတွင်း ကစားရတဲ့အခါတိုင်း လက်တွေ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ အမြဲ သက်သေပြနိုင်လို့ပါ ။ ”
” အခုတော့ သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို တကျော့ပြန် ရောက်လာပါပြီ ။ ယူဗင်တပ် အတွက်တော့ ချန်ပီယံလိဂ်လို ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာ တကယ့် ချန်ပီယံ တယောက်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ဘယ်ပွဲမဆို အနိုင်ယူနိုင်စွမ်း ရှိနေဆဲ ဖြစ်သလို ၊ ခရစ်တီယာနို မရှိတော့လည်း သူတို့ အသင်းဟာ တောင့်တင်းနေဆဲပါ ။ ”
” တကယ်လည်း မှန်ပါတယ် ။ သူတို့မှာ အတွေ့အကြုံ ၊ အရည်အသွေးမြင့် ကြယ်ပွင့် ကစားသမား များစွာ ရှိသလို ၊ အင်အား ကြီးမားတဲ့ ကစားသမား စာရင်းနဲ့ အတွေ့အကြုံရင့် ထိပ်တန်း နည်းပြ တဦးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။ ”
” ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ ဆုဖလားတွေနဲ့ ယဉ်ပါးနေတဲ့ ကလပ် ဖြစ်ပြီး ၊ ပြင်းပြတဲ့ အောင်မြင်လိုစိတ်လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အီတလီကို သွားပါမယ် ၊ ယူဗင်တပ်လို ထိပ်တန်း ကလပ် တသင်းနဲ့ အကြိတ်အနယ် ရင်ဆိုင် ကစားပါမယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်သက်တဲ့အရာပါ ။ ”
” ခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ အသင့် ရှိနေပြီး ၊ အခုထက် ပိုကောင်းတဲ့ အခြေအနေ တရပ်ကို ရောက်အောင် အမြဲတမ်း ရှေးရှုနေပါတယ် ။ ဒီတော့ ဒီလိုပွဲမျိုး ကစားရဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့် စောင့်စားနေပါတယ် ။ ”